Nepse Online निरन्तर दोस्रो बजार घट्न थालेपछि आइपिओ पनि बिक्न छाड्यो, वास्तविक क्षेत्र सुरुमै निरास! – nepseonline
Wednesday 05-25, 2022, 7:23 am
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चार महिनाअघि भृकुटीमण्डपमा ब्यक्त गरेको बिचार हो यो। खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि शेयर बजार निरन्तर घटिरहेको थियो। त्यसबेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजार प्रदर्शनी आयोजना गरेको थियो। प्रमुख अतिथिका रुपमा पुगेका खतिवडाले आफ्नो भनाइलाई गलत ब्याख्या गरिने गरेकाले आँफै आएर बोल्नु परेको भन्दै प्राथमिक शेयरको बजारलाई विस्तार गर्ने बताएका थिए।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै खतिवडाको भनाइका आधारमा शेयर बजार सुचकलाई तल र माथि पार्ने काम भइरहेको थियो। भृकुटीमण्डपको कार्यक्रमपछि ‘बोलीका भरमा सुचक तलमाथि पार्ने प्रबृत्ति’ लाई खतिवडाले रोक्न सफल पनि भए। तर प्राथमिक बजारलाई विस्तार गर्ने खतिवडाको घोषणालाई भने बिक्री हुन छाडेको आइपिओले भने निष्कृय बनाइ दिएको छ।